MOBA ဂိမ်းတွေမှာ အဖွဲ့၀င်ကောင်းတ‌စ်ယောက်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ #SquadGoals | Codashop Blog MM
Home Games Free Fire MOBA ဂိမ်းတွေ...
MOBA ဂိမ်းတွေမှာ အဖွဲ့၀င်ကောင်းတ‌စ်ယောက်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ #SquadGoals
ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားတယ်ဆိုတာက အပန်းဖြေမှုတစ်ခု အနေနဲ့ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ လူကြိုက်များတဲ့ လူငယ့် သဘာ၀ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုတစ်ခုလိုဖြစ်လာပါပြီ ။ Esports ရဲ့ လက်အောက်ကို ရောက်ရှိလာပြီး တတ်သစ်စ စက်မှုလုပ်ငန်း နဲ့ အလုပ်အကိုင် တစ်ခုကို ပြောင်းလဲလာပါပြီ။ အခု နာမည်ကြီးတဲ့ ဂိမ်းအမျိုးအစားကတော့ MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) ဖြစ်ပြီး League of Legends: Wild Rift နှင့် Mobile Legends တို့က အလွန်ကောင်းတဲ့ ‌ခေါင်းစဥ်တွေပါဘဲ။ ဒီဂိမ်းတွေရဲ့ တူညီတဲ့ အချက်က တစ်ချက်ကတော့ Teamwork ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပို့စ်မှာ အကောင်းဆုံးအသင်းသားတစ်ဦး ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်လဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ မျှ‌‌‌‌ ‌‌‌ေ၀မှာဖြစ်ပါတယ်။ ။ ဒါကြောင့် “Assemble!”, “Turtle Power!”, ဒါမှမဟုတ် “It’s Morphin Time!” ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စုပေါင်းညီညာ အောင်ကြောင်းဖြာ ဆိုသလို Teamwork ကြောင့်ဘယ်အချိန်မဆိုအောင်မြင်အောင် ကူညီပေးသွားမှာပါ။
ကြမ်းတမ္းစွာ ကစားခြင်းထက် ညီညွတ်ပါစေ
လျင်မြန်စွာကစားရတဲ့ နည်းဗျူဟာဂိမ်းတွေက အလွန်ကောင်းတဲ့ Teamwork နဲ့ မဟာဗျူဟာရေးဆွဲခြင်းတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာ : Legends of League: Wild Rift ။ ချန်ပီယံလိဂ် ကျွမ်းကျင်သူ တစ် ဦးချင်း အရည်အချင်းက အရေးကြီးပင်မယ့် ဂိမ်းထဲမှာ ဒါက အရေးမကြီးပါ။ MOBA ဂိမ်းကစားသောအခါ Teamwork ကဘဲ အသင်းတစ်ခုလုံးကို အနိုင်ရရှိဖို့ ကူညီမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်၏ Champs ကိုထုတ်ပြပါ! Wild Rift ကစားဖို့ နည်းဗျူဟာ လိုအပ်ပါတယ်။ သင်ရဲ့ Role ကို သိပြီး တစ်ခြားအဖွဲ့ ၀င်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ Rank ဂိမ်း ‌ရွေးကတည်းက ဒီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာကို စတင်ရမှာပါ။ အသင်း ရွေးချယ်တဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ ဘယ်ချန်ပီယံကို သင်အသုံးချင်တယ်ဆိုတာကို ပြောတဲ့ အကျင့်လေးလုပ်ထားပါ။ ဒါမှ သင်ရဲ့ အသင်းဖော်တွေက အဲ့ဒီ့ ချန်ပီယံကို မ Ban ဖို့ သတိရမှာဖြစ်ပြီး အရေးကြီးတာကတော့ အသင်းရဲ့ ပိုမိုထိရောက်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဘယ်လို synergize လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို အကြံဥာဏ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Adjust. Adjust. ဆက်ပြောရရင်တော့ သင့်ရွေးချယ်မှုကို ချိန်ညှိပေးရင် အသင်းသားအချင်းချင်း ရဲ့ Champions တွေ ရဲ့ Ability ကိုက်ညီနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Support က တစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့ ဖွဲ့စည်းမှုအပေါ် မူတည်ပြီး သူ့ ရွေးချယ်မှုများကို ချိန်ညှိနိုင်ပြီး တစ်ချိန်တည်းပဲပင် သူနဲ့ Lane တူသွားမယ့် ADC နဲ့ ညှိနှိုင်းနိုင်ပါတယ်။ သင့်မှာ ကာကွယ်‌ရေး (Offense) ကောင်းတဲ့ အဖွဲ့၀င်တွေရှိသလို တိုက်ခိုက်ရေး Defence အရမ်းတော်တဲ့ အဖွဲ့၀င်တွေလဲ ရှိတယ်လို့ပြောရင် သင်လက်ခံမှာပါ။ ချိန်ညှိပေးနိုင်ရင် ညီညွတ်မျှတတဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ရရှိမှာပါ။
ဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုလဲ စဥ်းစားပါ :
သင့်အဖွဲ့မှာ Crowd Control ကောင်းတဲ့လူရှိလား?
သင့်ရဲ့ Carries တွေက မြန်ဆန်ပြီး အလုပ်မျိုးစုံ လုပ်နိုင်ပါသလား?
လိုအပ်တဲ့ Damage ရှိသလား?
Tank တစ်မျိုး ထက်ပိုသုံးရသလား?
ရန်သူရဲ့ Kryptonite ကိုသိရှိပါ။ ချန်ပီယံတစ်ဦး ချင်းစီက ကွဲပြားစွာ ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် အခြား Character တွေ အကြောင်းကိုလည်း သင်သိရှိသင့်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အားနည်းချက်တွေ နဲ့ ပျက်စီးလွယ်တဲ့ အချက်တွေကို သိထားပါ။ ဒါက သူတို့ကို အလွယ်တကူ အနိုင်ယူနိုင်ဖို့သာမက ပိုကောင်းတဲ့ အသင်းသားတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့လည်း ကူညီပါလိမ့်မယ်။
အမြဲအတူနေပါ။ နောက်ထပ် အကြံပေးချက်တစ်ခုကတော့ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လို အတူရှိသင့်တယ်ဆိုတာပါဘဲ။ ဂိမ်းပြီးခါနီးတိုင်း Teamwork က သင်တို့ အဖွဲ့ ကို အနိုင်ရရှိစေမှဦပါ။ ရန်သူတစ်ယောက်ထဲသွားနေတာကိုတွေရင် အဖွဲ့ လိုက်ပူးပေါင်းပြီး သူ့ကိုတိုက်လိုက်ကျပါ။ သင်က Defence လုပ်နေရင် သင်ရဲ့ Tank ရဲဘော်ရဲဘက်က Ganking ကနေ ကာကွယ်ပေးဖို့ ကူညီနိုင်ပါတယ်။
စကားပြောတာ လွယ်ကူထိရောက်ပါတယ်။ ကစားသမားအများစုက ဒါကိုသိပ်သတိမထားမိပေမယ့် အချင်းချင်းစကားပြောတာက ဂိမ်းကစားရတာ အနိုင်ရဖို့ ပိုလွယ်ကူစေပါတယ်။ Wild Rift မှာ အချင်းချင်း စကားပြောဖို့က အရေးကြီးပါတယ် (တစ်ခြား ဂိမ်းတွေမှာကောပါဘဲနော်) ။ စာရိုက်ပြီးပြောတာထက်စာရင် Mic ဖွင့်ပြီး စကားပြောတာကပိုပြီး လွယ်ကူမြန်ဆန်ပါတယ်။ စကားပြောမှ အဖွဲ့၀င်တွေ ဒုက္ခရောက်နေတာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အမြန်တိုက်ခိုက်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် ပိုအဆင်ပြေစေပါတယ်။
အမှားစီက ပြန်သင်ယူတတ်ပါစေ။ ကောင်းမွန်တဲ့ ကစားသမား ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးဆုံး စိန်ခေါ်မှုကတော့ သင်ရဲ့ အမှားတွေကို ဝန်ခံတတ်ပြီး သင်ယူနိုင်ဖို့ပါဘဲ။ သင်က ခဏခဏအမှားလုပ်တာတို့ ဒါမှမဟုတ် အဖွဲ့ရဲ့ Stratagy တွေမလုပ်ဘဲ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတို့ဖြစ်ရင် စိတ်မလှုပ်ရှားပါနဲ့။ အာရုံစိုက်ပြီး ပြောင်းလည်းသင့်တာကိုပြောင်လည်းပါ။ အပြစ်တင်တာတို့ တစ်ခြား မကောင်းတဲ့ အမူအကျင့်တွေကို ရှောင်ပါ။ ဒါဟာ သင်တစ်ယောက်ထဲအတွက် မဟုတ်ဘဲ တစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့ ဆိုင်တာကို သတိရပါ။ သင်အသတ်ခံရရင် တစ်ခြားအဖွဲ့၀င်တွေက အသင်းရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို ရယူနိုင်သေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ အဖွဲ့နဲ့ ဆော့ရတဲ့ ဂိမ်းဖြစ်ပြီး အဆင်မပျက် လေ့လာသင်ယူနေရမှာပါ။
ဒါတွေကတော့ သင့် နဲ့ သင့်အဖွဲ့၀င်တွေ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အသုံး၀င်မယ့် Tips လေးတွေပါ။ ဂိမ်း Skill တွေတတ်ဖို့ တစ်ခြား Wild Rift ၊ PUBG Mobile ၊ Mobile Legends နဲ့ Free Fire ဂိမ်းလမ်းညွှန် တွေကို လဲ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Tranသင့်ရဲ့ Mobile Games တွေကို Codashop မှာ ဖြည့်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်။ ကျွန်ုပ်တို့ဆီမှာ မြန်ဆန်ပြီးလွယ်ကူချောမွေ့တဲ့ငွေဖြည့်ခြင်း နည်းလမ်းအများကြီးရှိလို့ မပူပင်ရတဲ့ ဂိမ်းဆော့ခြင်းအတွေ့အကြုံကို ခံစားနိုင်ပါတယ်။
Previous articleMLBB Hero လမ်းညွှန် : သင့်ရဲ့ရန်သူတွေကိုအလဲထိုးမယ့် Pacquito အတွက် အကောင်းဆုံး build
Next articleFree Fire မှာ အသုံးပြုရန် အ‌ကောင်းဆုံး Character ၆ ကောင်